स्वस्थ रहन दैनिक कसरी र कति पानी पिउने ? - GalaxyPati
२०७८ श्रावण २, शनिबार ११:११
सामान्यतः पानी तिर्खा लाग्दा मात्र पिउने गरिन्छ। तिर्खा लाग्नु भनेको शरीरले पानीको आवश्यकता भएको संकेत गर्नु हो। तिर्खा लाग्दा मात्र होइन, अरू बेलामा पनि नियमित पानी पिउनुपर्छ।
बिहान उठ्ने वित्तिकै १४ वर्षकी छोरी खुशीले भनिन्– मामु आज बिहान उठेदेखिनै टाउँको भारी भएर दुख्ला जस्तो भएको छ, मैले पानी पिएकै थिएँ तर पनि कमी भयो कि? अहिले गर्मी मौसममा छोरीलाई मात्र होइन अधिकांशलाई टाउँको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, शरीर गल्ने जस्ता समस्या बढेको